'Lisebenze kahle icebo lethu', kusho uHunt emuva kokuvuka ngoSuthu - Impempe
‘Lisebenze kahle icebo lethu’, kusho uHunt emuva kokuvuka ngoSuthu
Ubungalindela ukuthi agiye aze aqephuze uGavin Hunt ngemuva kokuthi iqembu lakhe iKaizer Chiefs liwine umdlalo wesibili kweyishumi eseliyidlalile kwiDStv Premiership.
IChiefs, ibisibizwa ngokuthi kukwaMazitapele kwazise wonke amaqembu abefika azithathele iphuzu noma amathathu ngaphandle kwenkinga. Cishe naMaZulu FC abezitshela ukuthi azozitamuzela nje nawo kodwa Amakhosi athi hhayi ngathi sesikhathele ukuba umhlezehlekwa, awaphendukela esiswini, awashaya ngo 1-0 omude.
UHunt uvele wazithela ngabandayo wathi ujabulele ukuthi abadlali bawalandelile amacebo abebewahlelile.
“Besisebenzela ekutheni balihlela kanjani iqembu labo. Sazama icebo lokuthi sibavimbe bengakwazi ukudla ngendlela abafisa ngayo ngoba banabadlali abahle kakhulu ababathengile. Besazi ukuthi abadlali babo basezimpondweni bayingozi. Sizamile ngoba ngicabanga ukuthi basidide kanye noma kabili esiwombeni sokuqala,” kusho uHunt.
“Nathi sibe nawo amathuba amahle. USamir (Nurkovic) usebenze omuhle imisebenzi ekubeni kade agcina ukudlala. Bengingathandi ukumdlalisa imizuzu engu-90 kodwa uyena kuphela umgadli esisele naye njengamanje, ngakho sinaleyo nkinga,” kulanda uHunt.
Uthe into ethi nje bawinile kubo ifana noKhisimuzi njengamanje ngoba isiyivelakancane njengekhansela emuva kokhetho.
“Njengamanje kithina ukuwina yinto enkulu kabi. Kunemidlalo obekumele ngabe sayiwina kodwa siyaxega emuva, ngisho nanamuhla bekuyinto efanayo.”
Uthe indlela Usuthu oluzame ngayo ukubuya ngemuva kokungenelwa yigoli yinto ejwayelekile ebholeni lakuleli.
“Uma ushaya igoli bese uhamba phambili, babe sebekujijimeza zonke izindawo bezama ukukucindezela, yindlela ejwayekile kuleli leyo. Lokho kubenza bavuleke nabo, njenganamhlanje nje. Bekumele sibangene sithole amanye amagoli.
“Umdlalo wethu olandelayo usekuhambeni eCape Town, uyazi ke akudlalwa laphaya uphuma uzwile, uwinile noma uhluliwe,” kusho uHunt.
IChiefs izodlala neCape Town City ngoMgqibelo bese kuthi ngoLwesibili ibe sekhaya lapho izobhekana khona neTshakhuma Tsha Madzovhandila.
Previous Previous post: Ayivumile amagoli iPirates ibukisa ngeTshakhuma iyibhaxabulela ekhaya
Next Next post: UCardoso uthi eyeqembu lonke nabalandeli iMan of the Match ayiwinile